MAXAA KALA SOCOTAA WAR BIXINTA KOOXDA DABA GALKA CUNU QABATEYNTA HUBKA EE SAARAN SOOMAALIYA IYO ERETERIYA AY KA DIYAARIYEEN SOOMAALAIYA
October, 31-2015 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
Warbixintii Guddiga Kormeerka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo Eritereya oo todobaadkan shaaciyey qoraalkoodii ugu danbeeyey oo ay uga hadlayaan xaalada Soomaaliya ayaa xog badan soo bandhigay. Warbixintan ayaa qodobada sida faah faahsan looga hadlay waxaa kamid ah Musuq Maasuq ka jira gudaha dowlada iyo maamulada ka jira wadanka Soomaaliya, Xaalada Amniga, ganacsiga Sharci-darada ah iyo Xaalada bini’aadamnimi.
Damul-jadiid & Galmudug
Guddiga ayaa sidoo kale ka hadlay dhismihii Maamulka Galmudug iyo loolankii dhexmaray Damuljadiid iyo Aala Sheekh ee ku aadanaa dadaalkii kooxahaasi ugu jireen inay gacanta ku dhigaan hogaanka maamulkaasi iyo laaluushkii lagu bixiyey si loo gato cododka xildhibaanada maamulkaasi.
Waxaa kamid ah qodobada looga hadlay warbixintan khilaafka ka dhashay dhismihii Galmudug gaar ahaan khilaafkii dhanka xaduudaha ee Puntland iyo waliba Ahlusunna Waljamaaca, iyadoo la sheegay in tilaabooyinka maamulka Galmudug ku sheegtay dhulka Puntland ay halis gelisay heshiiskii nabadeed ee Mudug ee la saxiixay 1991kii.
Arrimaha laga digay warbixintan waxaa kamid ah musuq maasuqa ka dhex jira dowlada Federaalka gaar ahaan inaan la bixin mushaharka ciidamada arrintan oo lagu tilmaamay mid khatar ku ah amniga dalka iyo la dagaalanka kooxda Al Shabaab.
Sidoo kale dagaalada u dhaxeeya beelaha ee ka dhacaya Somaliland iyo Puntland ee salka kuhaya dhulka daaqsinka iyo biyaha ayaa la sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheer loogalo sidii lagu xalin lahaa.
Shidaalka iyo macdanta
Khayraadka dalka ayaa kamid ah waxyaabaha mustaqbalka keeni kara dagaalo dhexmara xoogaga iyo maamulada ka jira dalka Soomaaliya, iyadoo guddiga ku baaqay in la helo sharuuc iyo nidaam qeybsiga dakhliga khayraadka sida macdanta iyo Shidaalka.
Wuxuuna guddiga si gaar ah uga digay dhaq dhaqaaqa ay gudaha Soomaaliya ka wadaan shirkadaha shisheeye oo la sheegay inay halis galin karaan nabada Wadanka. Waxaana kamid ah shirkadaha sida gaarka ah farta loogu fiiqaySoma Oil & Gas.
Dowlada Federaalka ayaa la sheegay inay shirkado Shisheeye u saxiixday inay baaritaan ka sameeyaan dhulka aysan maamulin sida Somaliland iyo Puntland.
Kaluumeysiga Soomaaliya ayaa kamid ah waxyaabaha looga hadlay warbixintan iyadoo guddiga ka hadlay shirkadaha shisheeye ee qandaraaska ka hela Dowlada Soomaaliya iyo Dowlad-Gobaleedyada kuwaasi oo si ka baxsan shuruucda uga kaluumeysta xeebaha Soomaaliya.
Tusaale waxaa warbixintan loogu xusay Shirkad laga leeyahay dalka China oo lagu magacaaboDoggang Dapingoo muddo 7 sano ah loo fasaxay inay ka kaluumeystaan xeebta Soomaaliya, Dowlada Federaalka oo heshiiskan saxiixday ayaa sidoo kale u fasaxday shirkadan inay keensato Ciidamo u gaar ah oo illaalsha maraakiibtooda jariifka.
Safaarada Soomaaliya ee Nairobi Kenya ayaa si gaar ah loogu eedeeyey lunsasho lacag boqolaal kun oo dollar ah intuu xilka hayey Safiirkii hore ee Ambs.Maxamed Cali Nuur (Americo). Lacagtan oo ah midii kasoo xarootay bixinta Baasaboorada ayaan in ku dhaw 50% aysan kusoo xaroon Khasnada dowlada.
Intii u dhaxeysa Janaayo 2014 illaa April 2015 Safaarada Nairobi waxay qabatay lacag gaareysa $960,836 lacagtan oo ah mid kasoo gashay bixinta Baasaboorada Soomaaliga oo tiro ahaan gaarayey 7,500 basaboor.
Isla Xiligaasi Safaarada waxa ay khasnada dowlada Soomaaliya kusoo shubtay lacag gaareysa $486,258 oo kaliya, iyadoo aan la aqoon meeshii ay ku baxday lacag gaareysa $474,578.
Guddiga Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey lacag deeq ah oo ka timid China oo gaareysa $1 milyan oo dollar oo sanadkii 2013 soo martay Safaarada Nairobi in lacagtaasi $479,314 kaliya lagu shubay bangiga dhexe. Intii kasoo hartay lacagtaasi oo gaareysa $517,686 ayaa lasiiyey xafiis lagu magacaabo (Ibrahim, Issack & Company) oo xaruntiisu tahay Nairobi, Kenya.
Dhinaca kale Ambassador Maxamed Cali Nuur (Americo) ayaa la sheegay in 10 maalin intuusan xilka Safaarada wareejin uu halkaasi keenay khabiiro dhanka Kombuterada (information technology specialists) kuwaasi oo masaxay ama tirtiray xogtii computerada Safaarada ku jirtay, halka macluumadkii kale ee qoraalka ahaan si toos ah loo burburiyey.
Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya Kenya Ambassador Jamal Hassan oo xilka wareegay 4tii Agoosto ee sanadkan ayaa lagu amaanay go’aankii uu qaatay oo ahay in la sameeyo baaritaan dhanka Xisaabaadka Safaarada soogalay (Audit) si looga hortago musuq maasuqa.